कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न थालिएको ‘कोरोना बिमा’ को दाबी भुक्तानीमा संकट देखा परेको छ । कोरोना महामारीमा साथ दिने भन्दै लाखौं नेपालीलाई बिमा लेख बिक्री गरेका निर्जीवन बिमा कम्पनीले दाबी भ...
२३ कात्तिक, २०७७
भावी नेतृत्वमा ढकाल कि प्रधान ?
नेपाली निजी उद्योग क्षेत्रको शक्तिशाली संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को चुनावी सरगर्मी बढेको छ । संस्थाको आगामी नेतृत्वका लागि मंसिर ११ र १२ गते निर्वाचन हुँदैछ । संस्थाको विधानअनुसार वरिष्...
अमेरिकी भावी नेतृत्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्छ ?
विश्व महाशक्तिको अग्रस्थानमा रहेको अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन जारी छ । विश्वकै शक्तिशाली मुलुकमा भावी राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने चासो विश्वब्यापी रुपमै व्याप्त छ । आगामी ४ वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति छान्ने प्र...
१९ कात्तिक, २०७७
चिनियाँ अघोषित नाकाबन्दी : ओलीको असफल कूटनीति कि बेवास्ता ?
२०७२ साल । विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । त्यही समयमा नेपालको छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगायो । नेपालले मात्र होइन भारतीय नाकाबन्दीपछि विश्वको नजर पर्न थाल्यो, चीनतिर । नेपालको...
१७ कात्तिक, २०७७